Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo caawa la kulmay Madaxweynayaashii hore – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo uu wehliyo guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim (Muudey) ayaa caawa xarunta Madasha Xisbiyada kula kulmay Madaxweynayaashii hore Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Ujeedka kulanka ayaa ahaa wada-tashiga arrimaha doorashooyinka soo socda ee dalka Soomaaliya.
Kulankan ayaa noqonaya kulankii 3-aad oo muddo bil gudaheeda dhex mara Hoggaanka Madasha Xisbiyada iyo Guddoonka Golaha Shacabka.
Falanqeeyayaasha siyaasadda dalka ayaa aaminsan in kulamadan ay yihiin kuwo Guddoonka Golaha Shacabka ugu kala dab-qaadayaan Madaxweynayaashi hore iyo Madaxweyne Farmaajo.
Xildhibaanno ka tirsan Madasha ayaa Kalfadhi u sheegay in aysan aqbali doonnin nooc kasta oo isku day muddo kororsi ah.
Madasha Xisbiyada oo war ka soo saaray kulankii Guddoonka Golaha Shacabka